I-Kikorangi Retreat-Delaware Bay - I-Airbnb
I-Kikorangi Retreat-Delaware Bay
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHoliday Nelson -
UHoliday Nelson - yi-Superhost
I-Kikorangi Retreat yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla yamava aseNew Zealand, aphumle kwaye anoxolo. Indawo engqonge intle ikubonelela ngembono ebukekayo & ehlala itshintsha yechweba, igadi yeziqhamo esekiweyo kunye nezitiya zeveggie, kunye nepokotho entle yamatyholo akudala aselunxwemeni.
Indlu yaselwandle enelanga ikhusi kwaye ibonelela ngokufudumala ngelixa ibekwe phakathi kwendalo edlamkileyo yeDelaware Bay.
Phezulu: Igumbi lokulala eli-1 (Inkosi): Ibhedi ye-Queen.
Isifundo (indawo evulekileyo ye-mezzanine ngaphezulu kokuhlala): Ibhedi enye okanye inokulungiswa njengeebhedi ezi-2 eziSingle okanye ibhedi yeKumkani ngesicelo.
Ngaphantsi: Igumbi lokulala 2: Ibhedi yenkosi - okanye ibhedi enye + enye xa uyicela,
Okunye - Igumbi leLanga: Ibhedi enye xa iceliwe.
Igumbi lokuhlambela loku-1 (Igumbi lokuhlambela eli-1): Ishawari, Ibhafu ekoneni okwahlukileyo, Indlu yangasese kunye neVanity, Igumbi lokuhlambela lesi-2 (elisezantsi): Ishawa yokuhamba, Indlu yangasese kunye neBasni.
Umbuki zindwendwe ngu- Holiday Nelson -
Izimvo eziyi-1 661
Abagcini babahlali abahlala kwindlwana engummelwane baya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kukhetheke ngakumbi ngokwabelana ngeemveliso zabo zasekhaya (amaqanda, ubusi, iziqhamo ezitsha kunye nemifuno) kunye nolwazi lwabo lwendawo, ukuhamba kwasekhaya kunye nemisebenzi kunye nokusingqongileyo okuhambelana ne-eco-friendly.
Abagcini babahlali abahlala kwindlwana engummelwane baya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kukhetheke ngakumbi ngokwabelana ngeemveliso zabo zasekhaya (amaqanda, ubusi, iziqhamo ezitsha…